Tokony ho tanjona ny hampakatra ny mombamomba anao ao amin'ny faritra nofidianao, ny tsirairay dia tokony ho fantatrao hoe iza ianao ary inona no ataonao, ary tsy fantatrao hoe avy aiza ny manaraka.
Ny fampiroboroboana dia midika fa ny fampitana hafatra ho an'ny olona maro araka izay azo atao amin'ny fomba maro araka izay azo atao. Ny zavatra rehetra ataonao izay hitan'ny olon-kafa dia azo raisina ho vidim-pamokarana satria ianao dia mifandray amin'ny tontolo amin'ny fomba maro amin'ny fotoana rehetra.
Ny fomba fiakanjonao, ny asanao, ny fiteninao ary ny fitsaboana ny olona dia hisy fiantraikany amin'ny fahombiazanao, tsy maintsy manombana ny fomba tsara indrindra hanaovana ireo zavatra ireo ianao eo amin'ny faritra iasanao ary ny tanjonao manokana.
Ny tari-dalana ankapobeny dia ny hahatonga anao hitandrina ny tsirairay amim-panajana, amim-panajana ary amin'ny fahatakarana ny zavatra ilain'ny olombelona. Ny olona dia maniry zavatra avy amin'ny fifandraisana rehetra ary ny fomba azo antoka dia sarotra ny manao izay hahatsapan'ny hafa fa tsy miraharaha azy ireo ianao sy ny zavatra ilainy.
Tokony 'hivarotra' anao amin'ny fotoana rehetra ianao, hahatsiaro ny tanjonao ary hiasanao amin'ny fomba izay hampivoatra azy ireo. Tsy zavatra azonao atao ny 9 amin'ny 5 ary avy eo dia mivoaka amin'ny alina ary manimba izany amin'ny alàlan'ny fihetsika adala, satria nilaza aho fa tsy fantatrao hoe avy aiza no hitranga manaraka izany ary iza no mijery.
Ataovy mora ny mampifandray ny hafatrao amin'ny alàlan'ny fananana karatra fandraharahana, na dia avy amin'ny milina fanofanana aza izy ireo dia mety ho madio sy madio, manana ny anaranao, ny laharana ary ny hafatra fohy na lohateny amin'izy ireo manazava izay ataonao. "Mividy trano haingana aho" na "Property Investor" dia mametraka haingana ao an-tsain'ny mpandray ny zavatra hitranga aminao. Manaova fanamarinana fahazarana, manontania mandrakariva izay ataon'ny olona sy mampiseho fahalianana, alaivo ny karatra misy azy ireo amin'ny ho avy, miresaka izay ataonao sy manome azy karatra - ataovy izany amin'ny olona rehetra izay mihaona aminao ary ho gaga amin'ny vokatra ianao.
Aza mitsahatra ny manangana ny mombamomba anao, rehefa sarotra ny fotoana dia mbola zava-dehibe kokoa ny mametraka ny tenanao, fa koa rehefa tsara ny fotoana dia aza mitsahatra mampiroborobo ny tenanao sy ny zavatra ataonao.
Asa momba ny andro: Ampidiro ny Marketing aloha